Akhriso: Qodobada uu xildhibaanka ka tirsan BFS ku weyn karo xubinnimadiisa - Caasimada Online
Home Warar Akhriso: Qodobada uu xildhibaanka ka tirsan BFS ku weyn karo xubinnimadiisa
Akhriso: Qodobada uu xildhibaanka ka tirsan BFS ku weyn karo xubinnimadiisa
Muqdisho (Caasimada Online)-Xeer ilaaliyaha Qaranka Somaliya Dr Axmed Cali Daahir oo maanta Warbaahinta kula hadlay Magaalada Muqdisho, ayaa sheegay laba Xildhibaan oo ka tirsan Baarlamaanka Somaliya in lagu sameynaayo Baaris.
Xeer ilaaliyaha ayaa labada Xildhibaan ku eedeeyay inay yihiin Qaran dumis, isla markaana dadaal xoogan ku bixinayaa sida Somalia ay u gali laheyd jawi burbur.
Xildhibaanadan ayaa wuxuu sheegay in lagu soo eedeeyay, eeda ah Qaran dumis iyo in dowladdo shisheeye ay ka soo qaateen lacag ay ku doonayaan inay ku dumiyaan dowladda Somaliya.
Haddaba Xildhibaanka ka tirsan baarlamaanka Somalia waxa uu leeyahay awoodo gaara oo xadidan, iyadoo talaabooyinka qaar uu yahay mid uu Xildhibaanka ku weynkaro xilka.
HOOS KA AKHRISO QODOBADA UU XILDHIBAANKA KA TIRSAN BFS KU WEYN KARO XUBINNIMADIISA
Qodobka 59aad ee dastuurka waxaa ku qoran sababaha uu Xildhibaan ku lumin karo xubinnimada baarlamaanka federaalka ah